Vagari vemumusha weEpworth vanoti kusavandudzwa kwenzvimbo yavo kuri kupa kuti hutano hwavo huve parumana nzombe.
Vagari ava vnoti kunyange hazvo iri shuviro yemugari wega wega wemudhorobha kuwana imba, kana pekuvakira, kuwana pekugara kunofanirwa kufambidzana neutano hwakanaka.
Mumwe mugari wemu Epworth, Amai Theresa Kamoto, avo vanogara kuOverspill vanoti kunyange hazvo vachifadzwa nekuti ndivo muridzi wemba izvo zvavaishuwira kwemakore akawanda, vanoti voshushikana nekutadza kuvandudzwa kwenzvimbo iyi.
Amai Kamoto vanoti nekuda kwekuti vanhu vanongovaka pamadiro, zvimbuzi nemigodhi inocherwa mvura hazvina kurongeka.
Mumwe mugari zvekare, VaGejo Mucheriwa, vanoti nzvimbo dzavo dziri kuramba dzichingodimburwa dzichiita diki.
VaMucheriwa vanoti nzvimbo dzavakapiwa dzava diki zvikuru zvekuti hadzikwani kuvaka imba, kuisa chimbuzi pamwe nemugodhi wemvura vakati vava kutyira kuti mvura dzavanonwa dzinogona kuve dzichisangana nemvura dzinobva muzvimbuzi.
Mumwe mugari wenzvimbo iyi, Amai Emma Muronzi, vanoti nekuda kwekuti Local Board yeEpworth haitombofambi ichitarisa kuti zvimbuzi nemigodhi zviri kuvakwa nenzira kwayo here, vava kutyira zvirwere zvakadai seTyphoid neCholera zvinogona kutanga munzimbo dzisina mvura yemupombi.
Nhengo yeEpworth Residents Development Association, VaJames Foya, vanoti vanhu vari kupihwa nzvimbo dzekugara vakawandisa izvo zvoita kuti vanhu vagare vakamanikidzana.
Kunyange hazvo Studio7 yatadza kubata veEpworth Local Board, mukuru we Harare Residents Trust, VaPrecious Shumba, vanoti matambudziko ari kuEpworth anobudisa pachena kutadza kwehurumende kuisa hurongwa hwakazara hwemadhorobha.
Epworth musha uri makiromita gumi nemaviri kubva muHarare, uye uri pasi peEpworth Local Board, iro rakaumbwa muna 1986, uye richishanda riri pasi bebazi rezvematunhu.
Nzvimbo dzakawanda dzemumusha uyu hadzina mvura yemupombi, magetsi uye vanhbu vakawanda havana mabasa.